XOG: Maxay ku heshiiyeen Safiirka Imaaraadka iyo Madaxweynaha Soomaaliya..? [Akhriso Qodobo muhiim ah] | Goobjooge.net: Somali News, Somalia news Analysis.
XOG: Maxay ku heshiiyeen Safiirka Imaaraadka iyo Madaxweynaha Soomaaliya..? [Akhriso Qodobo muhiim ah]
Imaaraadka Carabta iyo Dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay heshiis ka gaareen xiisad siyaasadeed oo in muddo ah u dhaxeysay, kadib kulan uu Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo xafiiskiisa kula yeeshay Safiirka imaaraadka u fadhiya dalka Soomaaliya Maxamed Axmed Cisman Al Hammadi.
Kulankan ayaa waxaa ka horeeyay kulan kale oo dhex maray safiirka iyo la-taliyaha madaxweynaha ee dhinaca Amniga, waxaana kulamadan oo dhan baahiyey Warbaahinta Imaaraadka Carabta, iyadoo aanay wax war ah kasoo saarin dowladda Soomaaliya.
Warar xogogaal ah ayaa Goobjooge.net u sheegay in heshiis laga gaaray xurguftii u dhaxeysay Imaaraadka iyo Villa Somalia, iyadoo Imaraadka uu aqbalay inuu joojiyo taageerada siyaasiyiinta ku kacsan Madaxweyne Farmaajo iyo dowladda uu hoggaamiyo, iyadoo taas bedelkeed dowladda ay dhinaceeda xoojineyso xiriirka ay la leedahay Imaaraadka.
Sidoo kale Imaaraadka ayaa dib u bilaabaya tababarada ay siin jireen ciidamada Militariga, iyo lacagtii ay ku kabi jireen Federaalka dhanka ciidamada oo ay hore u joojiyeen. Wakaalada Wararka Imaaraadka ayaa shaacisay ion Madaxweynaha Soomaaliya uu si weyn usoo dhaweeyey taageerada Imaaraadku siiyo dowladda Soomaaliya sida taageerada iyo tababarka ciidamada milateriga.
Madaxda sare ee dowladda Soomaaliya ayaa ka aamusay saldhigga milateri ee Imaaraadku ku yeeshay magaalada Berbera, waxaana hore loo hakiyey ilaa laba mooshin oo xildhibaannada Baarlamaanka ay ka keeneen faragelinta uu ku hayo arrimaha Soomaaliya.
Previous articleWeriye Magaalada Kismaayo loogu xiray Barnaamij ku saabsan Doorashadii Madaxweyne Farmaajo
Next articleXildhibaan Fiqi: “Dowladii Soomaali oo dhan soo dhoweeyeen waxaa loo ekeysiiyey mid shakhsiyaad leeyihiin..”